उन्मत्त भैरव पुज्न किन जान्छन् महिला ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
उन्मत्त भैरव पुज्न किन जान्छन् महिला ?
करुणा कुँवर,चर्चित मनोविज्ञ
पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिणपूर्वी भागमा उन्मत्त भैरवको सानो मन्दिर छ । त्यस मन्दिरभित्र निर्वस्त्र भैरव लिंग उत्तेजित बनाएर बसेका छन् । चलेको विश्वासअनुसार सन्तान नभएका महिलाले भैरवको लिंगमा आफ्नो गुप्तांग स्पर्श गरेमा सन्तान हुने विश्वास गरिन्छ । त्यसैगरी यौन सम्पर्कमा रुचि नभएका महिलाहरूले पनि भैरवको लिंग पूजा गरेको खण्डमा उत्तेजना आउँछ भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ । त्यही कारण दैनिकजसो धेरै महिलाहरू उन्मत्त भैरवको दर्शन गर्न पशुपतिनाथ परिसर पुगेको देखिन्छ । यसको कारण र अर्थ के हो ? के विश्वास अनुसारको परिणाम हात लाग्छ त ?
चलेको विश्वासअनुसार सन्तान नभएका महिलाले भैरवको लिंगमा आफ्नो गुप्तांग स्पर्श गरेमा सन्तान हुने विश्वास गरिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका दुईवटा उन्मत्त भैरवको मूर्ति चर्चित छन् । पहिलो पशुपति परिसरको र दोस्रो पाटनको । उन्मत्त लिंग भएको कारण नै यी भैरवहरूलाई उन्मत्त भैरव भनिएको हो ।
पशुपतिनाथमा रहेको उन्मत्त भैरवको मूर्ति तामाको हो । पाटनमा चाहिँ काठको उन्मत्त भैरवको मूर्ति रहेको छ । शास्त्रमा उन्मत्त भैरवको चर्चा र कामको वर्णन रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
मसँग सल्लाह गर्न आउने दिदी–बहिनीहरूले पनि उन्मत्त भैरवको प्रसंग उप्काउँछन् । त्यहाँ दर्शन गरेपछि फल प्राप्त भयो भन्ने महिला त मैले भेटेकी छैन । तर, गएको थिएँ, पूजा गरेको थिएँ भन्नेहरू चाहिँ मैले अक्सर भेट्ने गर्छु । यसले पनि ती मन्दिरमा समस्यामा रहेका महिलाहरूको भीडभाड हुने गर्छ भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ ।
धर्मका हरेक ग्रन्थमा पुरुष नै शक्तिशाली हो भन्ने देखाइएको छ । सवै काम उसैले मात्र फत्ते गर्न सक्छ भन्ने छ । सवैभन्दा शक्तिशाली, सवै काम फत्ते गर्न सक्ने आदि कारणले उसलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने हो । सन्तान भएन भनेपनि पुरुषलाई नै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पुरुषप्रधान समाजकै उपज हो ।
पुरुष प्रधान समाजको उपज
सन्तान नहुँदा महिलाहरू किन उन्मत्त भैरवको दर्शन गर्न जान्छन् भनेर बुझ्न चाहिँ सवैभन्दा पहिला हाम्रो समाज के मा आधारित छ ? यो समाज कसरी निर्माण भयो भनेर बुझ्न जरुरी छ । हामी सवैले बुझेको सत्य के हो भने धेरै अघिदेखि हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक छ । पुरुषप्रधान भएको हुनाले पुरुषत्वको बखान जताततै देख्न पाइन्छ । यी भैरव मन्दिरहरूको स्थापना र यसको मान्यताको जग पनि पुरुषप्रधान समाज नै हो ।
धामी–झाँक्रीलाई देखाउन शुल्क चाहिन्छ । र, पनि मान्छेहरू गइरहेका छन् । उन्मत्त भैरवमा त शुल्क पनि तोकिएको छैन होला । सित्तैमा मन ‘सन्तोक’ गर्ने ठाउँ मान्छेले किन छोड्छ र ?
नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेहरू छन् । केही समस्या आइपर्दा धामी–झाँक्रीमा जानेहरूको संख्या पनि ठूलो छ, हामीकहाँ । काठमाडौंका मानिसहरू पनि धामी–झाँक्रीमा जाने गरेका छन् । डाक्टरको क्लिनिक जस्तै गरेर धामी–झाँक्रीहरूले सेवा दिएका छन् । र, ती चलेका छन् भनेपछि त्यहाँ मान्छेको ‘फ्लो’ पक्कै पनि छ ।
खासगरी हाम्रो नशा नशामा बगिरहेको पुरातन सोचले हामीलाई विश्वास गर्न बाध्य पार्छ । यस्ता कतिपय कुरामा हामी विश्वास गर्छौं भने कतिपयमा अन्धविश्वासले पनि काम गर्छ ।
महिलाहरू उन्मत्त भैरवको दर्शन गर्न जाने मूल कारण पुरुषप्रधान समाजले स्थापना गरेका मान्यताहरू नै हुन् । र, अर्को मूल पक्ष आत्मविश्वासको कमी हो । त्यहाँ गएर एउटा विधि गर्दैमा के हुन्छ र ? बा भइहाल्छ कि ? भन्ने भएर हो । सन्तान नभएको चिन्ता र पीडामा भएकाहरू सायद यसै गर्दा ठीक हुने हो कि भन्ने लागेर पनि जान्छन् ।
त्यहाँको पूजाविधि विज्ञानसम्मत छैन । ‘नेचुरल’ पनि छैन भनेर आत्मविश्वास हुनेहरू पक्कै पनि त्यहाँ जाँदैनन् ।